ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့သေဆုံးမှုအများဆုံး အဆင့် ၃၂ ဖြစ်လာ။ နေ့စဉ်စစ်ဆေးသူ ၁၆,၀၀၀ နီးပါးတွင် ၂၀ ရာနှုန်းခန့်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိနေရ – H2Oupdatenews
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူ ၁,၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာ့သေဆုံးမှုအများဆုံး အဆင့် ၃၂ ဖြစ်လာ။ နေ့စဉ်စစ်ဆေးသူ ၁၆,၀၀၀ နီးပါးတွင် ၂၀ ရာနှုန်းခန့်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိနေရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ အယောက် ၁,၀၀၀ ကျော်လာသော ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံနှင့်နယ်မြေ ပေါင်း ၂၁၅ -ခုရှိသည့်အနက် သေဆုံးမှုအများဆုံး အဆင့် ၃၂ ဖြစ်လာသည်။ ထို့ပြင် ယခုမှ လွန်ခဲ့သည့် ၇-ရက်တို့၌ ၂၄-နာရီအတွင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ၏ ၂၀ ရာနှုန်းဝန်းကျင်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိနေရသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် နိုင်ငံတကာအဆင့် ၁၉ ၌ ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်ဟု Dhaka Tribune က ယမန်နေ့ ရေးသားသည်။
နိုင်ငံအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးမှု ပထမ ၅၀၀ သည် ၂ လကြာ ကာလအတွင်း သေဆုံးကြခြင်းဖြစ်သော်လည်းး ဒုတိယ ၅၀၀ သေဆုံးမှုအတွက် ရက်သတ္တပတ် ၂ပတ်ခန့်သာ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး လူသေဆုံးသည်မှ လူ ၁,၀၀၀ မြောက်သေဆုံးသည်အထိ ၈၅ ရက်ကြာမြင့်သည်။
တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အိန္ဒိယသည် ၈,၁၀၀ ကျော်ဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ပြီး ပါကစ္စတန်သည် ၂,၂၀၀ ဖြင့် ဒုတိယ၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သည် ၁,၀၁၂ ဖြင့် တတိယအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း ကျန်နိုင်ငံများမှာ ၎င်းတို့ထက် နည်းကြောင်း worldometer အရ သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ၏ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးမှုများတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုများပြီး ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်းခံရသူ ယနေ့ထိ ၇၄,၈၆၅-ဦးရှိသည့်အနက် ၁.၃၅ % သေဆုံးပြီး၊ ပြန်လည်နလံထ ကောင်းမွန်သူ ၂၁.၂၄ % ရှိသည်။ ကျန် ၇၇.၄၁% မှာ ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ၂၄-နာရီအတွင်း ကောက်ယူရရှိသော သံသယဖြစ်ဖွယ်လူနာ စုစုပေါင်း ၁၅,၉၆၅ ကို ဓါတ်ခွဲခန်းအသီးသီးတို့က စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၃,၁၉၀-ဦးတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စွဲကပ်လျှက်ရှိသည်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (DGHS) က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
((( Dhaka Tribune., June 10, 2020,” 1,000-death tally compared with other countries.By: Fahim Reza Shovon. နှင့် “ Covid-19: Daily test positivity percentage still under 20%. By: Arifur Rahman Rabbi ” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: Facebook အနေဖြင့် မြန်မာအရာရှိများ၏ လူမျိုးသုဉ်းပြုခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးရန် အမေရိကန်ခရိုင်တရားရုံးက ဖိအားပေး တောင်းဆို။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ သုံးသပ်လျှက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဟု Facebook ပြော။
Next Next post: လူမျိုးကြီးဝါဒဆန့်ကျင်ရေး ကင်ဘာရာလူစုလူဝေးများအား နှိမ်နင်းရလိမ့်မည်ဟု သြစတေးလျနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် သတိပေး၊ ဆန္ဒပြသူများ နှစ်ထပ်ကွမ်း မှားယွင်းနေဟု ပြော။ တရုတ်နိုင်ငံသားများလုံခြုံရေး သြစတေးလျ အကာအကွယ်ပေးရန် ပေကျင်းအစိုးရ တောင်းဆို